အမေရိကန်ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခု၌ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုအတွင်း လူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံး - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ဘတ်ဖလိုးရှိ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခု၌ မေ ၁၄ ရက်က သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက်)
နယူးယောက် ၊ မေ ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ဘတ်ဖလိုးရှိ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခု၌ မေ ၁၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သေနတ်သမားတစ်ဦး၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၁၀ ထက်မနည်း သေဆုံးသွား ကြောင်း ဒေသတွင်းမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့သည်။စစ်ဝတ်စုံပုံစံ အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ထားပြီး ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကိုင်ဆောင်ထားသော ၎င်းသေနတ်သမားသည် လူမည်းအများစုကြီးစိုး နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ ပစ်ခတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း AP သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါသေနတ်သမားကို ဖမ်းဆီးပြီး ရဲအချုပ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ဘတ်ဖလိုးရဲတပ်ဌာနက တွစ်တာလူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က ဘတ်ဖလိုးတွင် “ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ပစ်ခတ်မှု” ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု အိမ်ဖြူတော်က ဆိုသည်။
ဘိုင်ဒန်က “ ဒီနေ့ညနေ ကနေ နောက်တစ်နေ့အထိ နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလက်ခံရယူသွားမှာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်ပြန်ကြားရေးမှူး Karine Jean-Pierre ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ခေါင်းစွပ်အနက်ဝတ်ဆင်ထားသည့် ၎င်း သေနတ်သမားသည် လူဖြူတစ်ဦးဖြစ်ကာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သို့မဟုတ် အသက် ၂၀ နှစ် ဝန်းကျင်ခန့် ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေနှစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ နယူးယောက်ပိုစ့်သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ယင်းသေနတ်သမားအနေဖြင့် (posts) ပိုစ့်များရေးသားဖော်ပြထားခြင်းရှိ/မရှိကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း နှင့် ယင်းပစ်ခတ်မှုကို တိုက်ရိုက်(live) ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ဖွယ်ရှိကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ယင်းပစ်ခတ်မှုသည် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအပေါ် အလေးပေးလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိကို သိနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
Tops Friendly ဈေးဝယ်စင်တာဟု အမည်ရသည့် ယင်းဈေးဝယ်စင်တာကြီးသည် ဘတ်ဖလိုးမြို့လယ်ခေါင်မှ အရှေ့မြောက်ဘက် ၂ မိုင် အကွာခန့်တွင် တည်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘတ်ဖလိုးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သူ လက်ရှိ နယူးယောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Kathy Hochul က ပစ်ခတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် သူ(မ) သည် ဘတ်ဖလိုးမြို့သို့ သွားရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ယခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ သေနတ်နှင့်ဆက်နွယ်သည့် မတော်တဆမှုများကြောင့် လူပေါင်း ၂၈,၀၀၀ ကျော် သေဆုံး သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အကျိုးအမြတ်မယူသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Gun Violence Archive အဖွဲ့၏ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။(Xinhua)
NEW YORK, May 14 (Xinhua) — At least ten people were killed byagunman inasupermarket in Buffalo, New York State on Saturday afternoon, local media reported.
The gunman wore military-style clothing and body armor witharifle and opened fire after entering the supermarket located ataneighborhood dominated by black people, according toareport by The Associated Press.
The shooter has been taken in custody, tweeted Buffalo Police Department.
U.S. President Joe Biden has been briefed on “the horrific shooting” in Buffalo, according to the White House.
Biden “will continue to receive updates throughout the evening and tomorrow as further information develops,” White House press secretary Karine Jean-Pierre said inastatement.
The gunman isawhite man in late teens or early 20s wearingablack helmet, according toareport by the New York Post citing two witnesses of the carnage.
An investigation is under way to check if the gunman postedamanifesto online and the shooting was believed to be live-streamed, said the report, citingalocal enforcement official.
Investigators are also working to know if the shooting was racially motivated, the report added.
Named Tops Friendly Market, the supermarket is located around2miles northeast of downtown Buffalo.
New York Governor Kathy Hochul, who was born in Buffalo, said she is on the way to Buffalo to assist with the response to the shooting.
More than 28,000 people have died or been injured due to gun-related incidents in the United States this year, according toadatabase run by the nonprofit research group Gun Violence Archive. Enditem